लकडाउनमा महिला हिंसाका घटना बढे, ठाडो उजुरी आउने तर मिलापत्रमा टुंगिने – Sadarline
पठन पाठनका लागि कक्षा ८ सम्म शुल्क नलिन बिद्यालयलाई निर्देशन
करोडौं भारतीय नक्कली नोटसहित ६ जना पक्राउ
नरैनापुरको दोस्रो गाँउसभाले ल्यायो ४० करोडको बजेट
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीद्वारा खजुरा अस्पतालको अवलोकन
बालविवाह नियन्त्रण गर्न राप्तीसोनारीको अभियान
न्युजिल्याण्डमा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
बाँकेको जानकी गाउपालिकाको सातौ गाउँसभा सम्पन्न
फुटपाथ कब्जा गर्ने बिरुद्ध सक्रिय प्रहरी
कुखुरा चोर्ने दुईजना निर्मलाको हत्यामा जोडिने सम्भावना कति ?
लकडाउनमा महिला हिंसाका घटना बढे, ठाडो उजुरी आउने तर मिलापत्रमा टुंगिने
१३ असार २०७७, शनिबार १८:१३
सदरलाइन / लक्ष्मी तिमिल्सेना,
नेपालगञ्ज : कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउन छ । मान्छे घरभित्र छन् । परिवारका सदस्यसंगै छन् । यस्तोमा हिंसाका घटना घट्नु साटो बढेका छन् । सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेसँगै बाँके जिल्लामा हिंसाका घटना बढेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको तथ्याङ्कमा गत वर्षको तुलनामा पछिल्लो ३ महिना यता जिल्लामा हिंसाका घटना बढेको पाईएको छ ।
तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत्र ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्म बाँकेमा ५२ वटा घरेलु हिंसाको ठाडो उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये ४४ जना महिला पीडित छन् । ८ वटा पुरुषले समेत घरेलु हिंसामा परेको उजुरी दिएका छन् । ठाडो उजुरी धेरै आए पनि त्यस्ता उजुरी मुद्धा प्रक्रियामा गएका छैनन् । जिल्लामा एक जना महिलाले मात्रै घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको प्रहरी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा ७ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । त्यसमा ५ बालिका र २ महिला पीडित छन् । २ बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास भएको छ । यस्तै एक बालिकालाई अपहरण गरि जबरजस्ती करणी गरिएको छ । एक बालविवाह भएको छ भने १ बालिकामाथि यौन दुराचारको घटना भएको छ । एक बहुविवाहको घटना पनि दर्ता भएको छ ।
हिंसामा परेका धेरैजसो महिलाले घर परिवारका सदस्यबाटै हिंसा भोग्नु परेकोे छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बाँकेको ईन्चार्ज तथा प्रहरी सहायक निरिक्षक श्यामकुमारी पाईजाले घरभित्र र आफन्तबाट हिंसा भोगेका महिला धेरै आएको बताईन् । ‘प्रहरीमा घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरू ठाडो उजुरी लिएर आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । तर मुद्धा प्रक्रियामा जादैछनन् । छलफल र मेलमिलापमा जाने गरेका छन् ।’
महामारीको समयमा महिला तथा बालबालिका घरेलु हिंसा र जबरजस्ती करणी मात्र नभई अन्य धेरै प्रकारका हिंसामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्ता घटनामा पनि महिला पीडित छन् ।
बन्दाबन्दीको समयमा २३ वटा सामाजिक हिंसाका घटना भएका छन् । जध्ये १७ जना महिला पीडित छन् । त्यसमा ५ जना पुरुष पीडित छन् । यस अवधीमा २ बालक, २ बालिका र ३ महिला गरि ७ जना हराएका छन् । ३ बालक, १ बालिका र १ महिला गरि ५ जनालाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको छ । एक बालक र २ जना महिला गरि ३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । एक महिलाले आत्महत्याको प्रयास गरेकी छन् । कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि ३ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
लकडाउनको अवस्थामा देवानी प्रकृतीको मुद्दा लिइएन । अदालत पुर्णरुपमा बन्द भएको कारणले सरकारवादी अर्थात फौजदारी मुद्धामा पनि खासै ध्यान दिइएन । यसले पीडित झनै पिडामा परेको मानवअधिकारकर्र्मी तथा अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । ‘यो समयमा महिलालाई कामको बोझ पनि बढेको छ । घरभित्रै पनि अनेकथरी हिंसा भएको छ,’ उनले भने–‘सुरक्षाकर्मीले पनि हिंसाको गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकेको अवस्था छ ।’
हिंसाको ठाडो उजुरीका लागि पनि सहज बाताबरण नभएको बेला मुद्धा प्रत्रिया टाढाको कुरा रहेको उनले बताए । घरेलु सहित कतिपय महिलासम्बन्धी मुद्धा हेर्न हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायीक समिति छ । तर, त्यले पनि महिलाका मुद्धामा ध्यान दिन नसकेको अधिकारकर्मी बसन्तले बताए ।
सदरलाइनडटकम, नरैनापुर (बाँके) : बाँकेको नरैनापुर गाउपालिका कोबिड–१९ नोबल कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्यो, बाँके जिल्लाकै अत्यन्तै विकट गाउपालिकाको पहिचान बनाएको नरैनापुरमा अहिले संक्रमितको संख्या शुन्यमा झरेको छ । कसरी नियन्त्रणमा आयो कोरोना भाईरसको हटस्पट बनेको नरैनापुरमा कोरोनाको संक्रमण ? एकाएक संक्रमितको संख्या बृद्धि भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि निषेधाज्ञा सहित […]
३१ भाद्र २०७५, आईतवार १४:२३
४ भाद्र २०७५, सोमबार १७:३३
७ असार २०७६, शनिबार १०:४१
नेपालगञ्ज उप–महानगर वडानं. १८ को वडा भेला आयोजना
२८ पुष २०७३, बिहीबार १४:४०
बैजापुरमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी परिवार महिला संघद्वारा कम्मल बितरण तथा स्वास्थ्य शिविर
९ बैशाख २०७८, बिहीबार ११:५६
लकडाउनको पहिलोदिन नेपालगञ्ज (फोटो कथा)